Neymar iyo Mbappe oo qarka u Saaran in laga ganaaxo Garoomada Kubada Cagta Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Neymar iyo Mbappe oo qarka u Saaran in laga ganaaxo Garoomada Kubada Cagta Sabab?
(01-09-2017) Xiriirka kubada Cagta qaarada yurub ee UEFA ayaa Goordhow soo saaray war Saxaafadeed ku saabsan in ay baaritaan ku samayn doonaan lacagihii kooxda PSG ku iibsatay labada Cayaaryahan ee Caalamka ugu qaalisan.
UEFA ayaa sidoo kale sheegtay in hadii lagu helo dacwada loo haysto kooxda PSG mudo aad u dheer Garoomada laga ganaaxi doono Cayaartoyda ay soo iibsadeen ee kala ah Neymar iyo Mbappe kuwaas oo aan u dheeli doonin PSG koobabka qaarada yurub.
Kooxda dalka France ee PSG ayaa labadaan Cayaaryahan ku soo kala qaadatay 222 Milyan iyo 180 Milyan oo lacagta yurub ah waxaana loo haystaa in ay ku xad gudbeen sharciga u yaala kooxaha yurub ee UEFA Club Financial Control Waxaana baaritaankaan samayn doona dad ku xeel dheer dhanka dhaqaalaha.
PSG ayaa shaacisay in ay heshiis amaah kula soo Wareegeen Cayaaryahanka 18 Sano jirka ah ee Mbappé balse sheegashadaas ayaa Xiriirka UEFA sheegeen in ay tahay mid looga dhuumanayo sharciga xadaynaya lacagta ay kooxdu qarasha garayn karayso Xili Cayaareedkaa taas oo ku xiran lacagta Faa iido ahaan u soo gashay Naadiga Xiligii dhamaaday.